စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ ကျွန်မ ချစ်သူ – Shinyoon
စိတ်ကောက်တတ်တဲ့ ကျွန်မ ချစ်သူ
ကျွန်မချစ်သူ ကလေးဆန်တယ်လို့ပဲပြောရမလား … ဒါမှမဟုတ် မရင့်ကျက်သေးဘူးလို့ပဲပြောရမလား သေချာတာတစ်ခုကတော့ကျွန်မအပေါ်အမြဲတမ်းအနိုင်ယူတယ် ပြီးတော့ ကိုယ့်အပေါ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဆိုတာမျိုး သိပ်ပြီး မတွေးပေးတတ်ဘူးလေ
ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်သူသက်တမ်းမှာ ကိုယ်စိတ်ကောက်ပြီး သူချော့ခဲ့ရတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်တွေထက် သူစိတ်ပြန်ကောက်လို့ကိုယ်ပြန်လျှော့ခဲ့ရတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်တွေက ပိုပြီးများတယ်လို့ပြောရင် ယုံပါ့မလား
တကယ်ပါ တစ်ခါတစ်လေ သူကအမှားလုပ်တာမှန်ပေမယ့်လဲ ကိုယ်စိတ်ကောက်ဖို့ကြံနေတုန်းရှိသေးတယ် သူကအရင်ဦးအောင် စိတ်ကောက်ပြ စိတ်ဆိုးပြခဲ့တဲ့အကြိမ်တွေကတော့အခါခါပေါ့ …ဒါလေးတောင် နားလည်မပေးဘူးလားဆိုတဲ့စကားတွေကတော့ သူ့လက်သုံးစကားပေါ့
တစ်ခါတစ်ခါတွေးမိတယ် … ကိုယ်က မိန်းကလေးလား သူကပဲ စိတ်အရမ်းကလေးဆန်နေတာလားပေါ့ … ကိုယ်ဆိုးဖို့မတွေးခင် … သူကအရင်ဦးအောင် စိတ်ဆိုးပြတဲ့နေရာမှာတော်တယ် ကိုယ်က ပြသနာမရှာခင် သူက ပြသနာရှာပြီး ဖုန်းချသွားတတ်တဲ့နေရာမှာလဲတော်တယ် …
မတွေးတတ်တော့ပါဘူး … ဒီလိုလူမျိုးဆီက အရင်က ဂရုစိုက်ခံချင်လိုက်တာဆိုပြီး မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ် ကိုယ်မျှော်လင့်ခဲ့တာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ် ဘာတစ်ခုမှ မရခဲ့ပါဘူး ကိုယ့်ကို အလျှော့ပေးရကောင်းမှန်း အလိုလိုက်ရကောင်းမှန်း သူဘယ်တုန်းကမှ မသိခဲ့ဘူး သိရဲ့နဲ့လဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တာပဲ များပါတယ် ….
ဒီလိုစိတ်ကောက်တတ်တဲ့ ချစ်သူကိုမှ ပိုင်ဆိုင်ထားရခဲ့တာကိုက ကိုယ့်ရဲ့ ကံပေါ့ … မိန်းကလေးတစ်ယောက် ပီပီ စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ချင်တဲ့ စိတ်ကို ခဏခဏ ချိုးနိမ်ရမယ် ပြီးရင် ကိုယ်ပြသနာရှာရင် ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီး ပြသနာရှာတာကို သည်းခံရတယ် …
စိတ္ေကာက္တတ္တဲ့ ကြ်န္မ ခ်စ္သူ
ကြ်န္္္မခ်စ္သူ ကေလးဆန္တယ္လို့ပဲေျပာရမလား … ဒါမွမဟုတ္ မရင့္က်က္ေသးဘူးလုိ့ပဲေျပာရမလား ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ ့ကြ်န္မအေပၚအျမဲတမ္းအနိုင္ယူတယ္ ျပီးေတာ့ ကုိယ့္အေပၚ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ဆုိတာမ်ိဳး သိပ္ျပီး မေတြးေပးတတ္ဘူးေလ
ကြ်န္မတုိ့နွစ္ေယာက္ရဲ႕ခ်စ္သူသက္တမ္းမွာ ကိုယ္စိတ္ေကာက္ျပီး သူေခ်ာ့ခဲ့ရတဲ့ အၾကိမ္အေရအတြက္ေတြထက္ သူစိတ္ျပန္ေကာက္လို့ကုိယ္ျပန္ေလ်ွာ့ခဲ့ရတဲ့ အၾကိမ္အေရအတြက္ေတြက ပိုျပီးမ်ားတယ္လုိ့ေျပာရင္ ယံုပါ့မလား
တကယ္ပါ တစ္ခါတစ္ေလ သူကအမွားလုပ္တာမွန္ေပမယ့္လဲ ကိုယ္စိတ္ေကာက္ဖို့ၾကံေနတုန္းရွိေသးတယ္ သူကအရင္ဦးေအာင္ စိတ္ေကာက္ျပ စိတ္ဆိုိးျပခဲ့တဲ့အၾကိမ္ေတြကေတာ့အခါခါေပါ့ …ဒါေလးေတာင္ နားလည္မေပးဘူးလားဆိုတဲ့စကားေတြကေတာ့ သူ့လက္သံုးစကားေပါ့
တစ္ခါတစ္ခါေတြးမိတယ္ … ကိုယ္က မိန္းကေလးလား သူကပဲ စိတ္အရမ္းကေလးဆန္ေနတာလားေပါ့ … ကိုယ္ဆိုးဖို့မေတြးခင္ … သူကအရင္ဦးေအာင္ စိတ္ဆိုးျပတဲ့ေနရာမွာေတာ္တယ္ ကိုယ္က ျပသနာမရွာခင္ သူက ျပသနာရွာျပီး ဖုန္းခ်သြားတတ္တဲ့ေနရာမွာလဲေတာ္တယ္ …
မေတြးတတ္ေတာ့ပါဘူး … ဒီလုိလူမ်ိဳးဆီက အရင္က ဂရုစိုက္ခံခ်င္လုိက္တာဆိုျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဖူးတယ္ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာပဲ အဖတ္တင္ပါတယ္ ဘာတစ္ခုမွ မရခဲ့ပါဘူး ကိုယ့္ကို အေလွ်ာ့ေပးရေကာင္းမွန္း အလုိလုိ္က္ရေကာင္းမွန္း သူဘယ္တုန္းကမွ မသိခဲ့ဘူး သိရဲ႕နဲ႕လဲ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ခဲ့တာပဲ မ်ားပါတယ္ ….
ဒီလိုစိတ္ေကာက္တတ္တဲ့ ခ်စ္သူကိုမွ ပိုင္ဆိုင္ထားရခဲ့တာကိုက ကိုယ့္ရဲ႕ ကံေပါ့ … မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ပီပီ စိတ္ဆိုးစိတ္ေကာက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ကို ခဏခဏ ခ်ိဳးနိမ္ရမယ္ ျပီးရင္ ကိုယ္ျပသနာရွာရင္ ကိုယ့္ကိုျပန္ျပီး ျပသနာရွာတာကုိ သည္းခံရတယ္ …
ကိုယ့်ကို တကယ်မချစ်တဲ့သူမှာ ကိုယ်နဲ့ဝေးရမယ် အကြောင်းပြချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်